Nhau - Pfupiso yaSeptember Exhibition
GUMI NEGUMI (2020) CHINA MHUKU HUSBANDRY EXPO
Mune ino Fair, isu tinogadzirira michina miviri mudumba medu.
Item Kwete.: MT-101-3
Zita: Egg kutapa uye kurongedza muchina
1. Kugona: zai 25000-30000 paawa
2. Unganidza neyepakati yekuunganidza mutsetse kana yekuwacha yekugadzira yekugadzira mutsara
3. Kuisa mazai nekurema uye kutakura automaticaly, gadzirisa musoro muhombe kumberi, bhenefiti yekuchengetedza.
4. LCD inobata skrini, zviri nyore kumisikidza akasiyana mamakisi 'huremu.
5. Inokodzera 30 mazai mapepa tireyi kana epurasitiki tireyi.
6. otomatiki denester kana Semi-otomatiki denester
MT-101 Kuisa mazai uye kurongedza muchina wakagadzirirwa kusangana ne "rocket" zvinoda kushanda zvakanaka uye hutano hwechikafu mukugadzirisa kwezai. Kunyatsobatana nevatengi vedu kunoita kuti michina yedu iwedzere kufarirwa mumusika, uye itibatsire isu kubudirira. Sarudzo yekusarudzika inogona kuwedzerwa sezvo paine akasiyana modular system. Inokodzera zai kurongedza zviteshi uye yehuku mazai purazi. Une zvakawanda zvinonakidza panguva yeFair.
MT-110S Egg kurongedza muchina, inonziwo purazi kurongedza. Inogona kubata ne25000-30000 zai paawa. Yakakurumbira kwazvo mumatanda epurazi. Unganidza iyo yepakati yekuunganidza mutsara, kurongedza mazai otomatiki, kudzikisira iro basa.
Iyi michina yatengesa zvidimbu zvinopfuura mazana maviri, unogona kuwana michina yedu padunhu rega rega reChina. Tinogona kuronga kushanya chero nguva. Usatombodzokera kumashure. Vatengi vazhinji vanoibvunza iyo panguva yeFair.
Iyi Fair isu takaratidzawo kwedu purazi kurongedza munzvimbo yedu. Sezvo Covid-19 ichiri kupararira pasirese, vatengi vanobva kunze kwenyika vaisagona kuwana nguva yekushanyira Fair iyi. Asi tichiri nevazhinji vanoshanya.
Tisangane mune Inotevera CHINA MHUKU HUSBANDRY EXPO uye VIV Qingdao 2021.
Zai kurongedza muchina, Otomatiki Egg Kuputsa Muchina, Yakabikwa Zai Kutemesa Muchina, Egg Kuronga Uye Kurongedza Machine, Hatching Egg Packer, Egg Kupwanya Muchina Vagadziri,